Ny London Missionary Society (LMS), izay azo atao amin' ny teny malagasy hoe "Fikambanana Misiôneran' ny Londra", dia fikambanana misiônera kristiana tsy miankina amin' ny fiangonana, niorina tao Angletera tamin' ny taona 1795. Kristiana prôtestanta (anglikana, evanjelika, kôngregasiônalista, batista, metôdista sns.) no mikambana ao aminy tamin' izany taona izany. I Edward Williams no nanangana azy.
Io fikambanana io no nipoiran' ny misiôna kristiana maro izay nampiely ny fivavahana kristiana tany Azia Atsinanana sy tany amin' ireo nosy amin' ny faritra atsimo ao amin' ny Ranomasimbe Pasifika ary taty Afrika atsimon' i Sahara, isan' izay ny taty Madagasikara.
Amin' izao fotoana izao dia mikambana ao amin' ny Council for World Mission (CWM), izay nikambanan' ny Colonial Missionary Society sy ny Presbyterian Board of Missions koa, ny London Missionary Society. Isan' ny misiônera nirahiny i David Livingstone izay namantatra ny faritry ny Farihy Lehibe any Afrika Afovoany sy nitory ny Filazantsara tany, sy i Robert Morrison ilay mpandika teny malazan'n y Baiboly amin' ny fiteny sinoa, ary ilay sinôlôga James Legge.
Nahavita be ny London Missionary Society noho ny nahombiazany tamin' ny fampidirana ny fivavahana kristiana taty Madagasikara tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-19.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Missionary_Society&oldid=1012809"
Voaova farany tamin'ny 19 Jolay 2021 amin'ny 08:52 ity pejy ity.